Ukutya kwe-SIRT, isicwangciso sokutya esivumela itshokholethi kunye newayini ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ukutya okutsha kubonakala ngathi kuyavela rhoqo, kwaye ukutya kwe-SIRT yenye yezona zinto zintsha. Isicwangciso sokutya siye saziwa ngokukhuthaza ukutya okufana netshokholethi kunye newayini.
Abenzi bayo bayanyanzelisa ukuba ayisiyiyo ifadesi edlulayo, kodwa "ii-sirtfoods" (ukutya okuvunyelweyo ekudleni) yimfihlo yokuvula ukulahleka kwamafutha kunye nokuthintela izifo.
1 Kukuthini ukutya kwe-SIRT
1.1 Ukutya okungcono oku-16 (abakhonzi) bokutya:
2 Ukutya kwahlulwe ngokwamanqanaba amabini:
2.1 Isigaba 1
2.2 Isigaba 2
3 I-SIRT IJuice Recipe
4 Ngaba ukutya kwe-SIRT kuyasebenza?
Kukuthini ukutya kwe-SIRT
U-Aidan Goggins no-Glen Matten, iingcali ezimbini ezaziwayo ezisebenza kwiklinikhi yabucala e-UK, baphuhlise i-SIRT Diet. Babhengeza indlela yokusebenza njengesicwangciso esitsha esisebenzayo ngokusebenza "kofuzo lwakho olunqinileyo."
Oku kutya kusekwe kuphando lwee-enzymes ze-sirtuin (i-SIRTs), iqela leeproteni ezisixhenxe ezifumaneka emzimbeni ezibonisa imisebenzi eyahlukeneyo, kubandakanya imetabolism, ukudumba, kunye nokulindela ubomi.
Ezinye iikhompawundi zinokukwazi ukunyusa inqanaba lezi proteni emzimbeni, kunye nokutya okukuzo kubizwa ngokuba "ngabasebenzi."
Ukutya okungcono oku-16 (abakhonzi) bokutya:
isiselo somdiliya esibomvu
Itshokholethi ekrakra (85% cocoa)
I-Matchá iti eluhlaza
Ipilisi yeliso lentaka
Ukutya kudibanisa ukutya okunje kunye nokuthintelwa kweekhalori, ezinokubangela ukuba umzimba uvelise amanqanaba aphezulu ee-sirtuin enzymes.
Abavelisi bokutya bathi ukulandela ukutya kwe-SIRT kuya kukhokelela ekunciphiseni umzimba ngokukhawuleza, ukugcina ubunzima bemisipha kunye nokukhusela umzimba kwizifo ezinganyangekiyo.
Ukutya kwahlulwe ngokwamanqanaba amabini:
Isigaba sokuqala sithatha iintsuku ezisixhenxe kwaye sibandakanya isithintelo sekhalori kunye nejusi eninzi eluhlaza (jonga iresiphi engezantsi). Injongo yakhe kukuqala ukunciphisa umzimba kwaye ubanga ukuba ulahle i-3,2 yeekhilogram ngeentsuku ezisixhenxe.
Ngexesha leentsuku ezintathu zokuqala zenqanaba lokuqala, ukutya ikhalori kuthintelwe kwiwaka leekhalori, iijusi ezintathu eziluhlaza ziyanxila ngosuku kunye nesidlo esinye.
Yonke imihla unokukhetha kwiindlela zokupheka zokutya ze-SIRT, ezibandakanya abakhonzi njengeyona ndawo iphambili yesidlo.
Imizekelo yokutya yi-mofu-topped tofu, i-omelette, okanye istub shrimp ne-buckwheat noodles.
Ngeentsuku ze-4-7 zesigaba sokuqala, ukunyusa i-caloric kwanda ukuya kwi-1.500. Oku kubandakanya iijusi ezimbini eziluhlaza ngosuku kunye nezinye izidlo ezizezona zityebileyo, zombini ezinokuthi zikhethwe kwincwadi.
Isigaba sesibini sithatha iiveki ezimbini. Ngeli nqanaba "lolondolozo", kuya kufuneka uqhubeke ukunciphisa umzimba ngokuthe chu.
Unokuziphinda ezi zigaba zibini amaxesha ngamaxesha njengoko ufuna ukunciphisa umzimba.
Umbono kukubeka phambili izithako zabasebenzi kuzo zonke izitya kunye nokutya. Kwakhona, kuya kufuneka uqhubeke usela ijusi eluhlaza yonke imihla.
Ngale ndlela, ukutya kuya kuba ngotshintsho kwindlela yokuphila kunokutya okukodwa.
I-SIRT IJuice Recipe
75 gram yeklabishi
Iigrama ezingama-30 zerokethi
5 iigrem zeparsley
2 iinkuni zeseleri
1 cm ijinja
Isiqingatha seapile eluhlaza
Isiqingatha setispuni seteshisi eluhlaza
Betha zonke izithako ngaphandle kwematchá kwaye uzigalele kwiglasi. Emva koko, xuba ijusi yelamuni kunye nepowder eluhlaza iti eluhlaza ijusi.
Ngaba ukutya kwe-SIRT kuyasebenza?
Ababhali bendlela benza amabango anenkalipho, kubandakanya nokutya kunokukhawulezisa ukunciphisa umzimba, kusebenze "ufuzo olungenamzimba," kunye nokuthintela izifo.
Ingxaki kukuba akukho bungqina buninzi bokubaxhasa. Ukuza kuthi ga ngoku, abukho ubungqina obukholisayo bokuba icebo lineziphumo ezincomekayo ekulahlekeni kwesisindo kunayo nayiphi na ikhalori yokutya ethintelweyo.
Kwaye ngelixa okuninzi koku kutya kuneempawu zempilo, akukho zifundo zexesha elide ebantwini zokufumanisa ukuba ngaba ukutya ukutya okunotye kubakhonzi kuzisa izibonelelo zempilo ezibonakalayo.
Njengakuphi na ukutya okuthintelayo, kuya kukunceda ulahle iiponti ezimbalwa ekuqaleni, kodwa uya kubuyela kwindlela yakho yesiqhelo yokutya nje ukuba ubuye.